China Ele mmadụ anya n'ihu ụlọ ọrụ nke ngwaahịa ụlọ ọrụ na-emepụta | Zhenyuan
Na mmepe nke sayensị na teknụzụ, ntinye nke nchara nchara na injinia ihe na-arụ ọrụ karịa ụwa. Eldgbado ọkụ bụ ihe dị mkpa teknụzụ nhazi dị na nhazi nke ígwè.Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ nke mba ndị mepere emepe, naanị nchara a na-eji eme ihe mgbe ịgbado ọkụ na-ewe ihe dị ka 45% nke nchara nchara kwa afọ. China na njedebe nke 1980s, usoro a na-agbanye ọkụ. emeela 30% nke nchara nchara.
Na 1992, nchara e mepụtara na China ruru nde 80, mana ka ọ na-erule ngwụsị nke afọ 1997, nchara igwe China erutela nde tọn 94. Dị ka usoro mmepe si dị, njin nke ngwa ngwa China ga-agbaji site na 100 nde tọn mgbe ọ banyechara na narị afọ ọhụrụ.
Atụmatụ nke ígwè Ọdịdị:
Maka igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ (Igwe akụkụ, i-ígwè, nchara ígwè, eriri igwe, wdg, na-akpụ nchara mgbidi, efere ígwè, oyi na eriri waya dị ka ihe bụ isi, site na ịgbado ọkụ, njikọta ma ọ bụ njikọ rivet, dị ka iwu ụfọdụ iji jikọta n'ime mgbidi ụlọ bụ isi, na-ezighi ezi site na ịgbado ọkụ, bolt ma ọ bụ njikọ njikọta jikọtara ihe owuwu ndị bụ isi n'ime ihe dịka nhazi ígwè iji kwado ibu ahụ.
Ike dị elu na obere ihe ike. Ike nke ígwè dị ọtụtụ okpukpu karịa nke osisi, brik na nkume, ihe ndị ọzọ na ihe ụlọ ndị ọzọ. Ya mere, mgbe ibu na ọnọdụ dị otu, ihe owuwu ahụ nke ígwè nwere obere ibu nwụrụ anwụ, obere ngalaba achọrọ, ọ dịkwa mfe maka njem na nrụpụta.
(2) Ezi plasticity na ike.Steel nwere ezigbo plasticity, n'ozuzu, agaghị abụ n'ihi na mberede na bufee ma ọ bụ mpaghara bufee mere site na mberede mgbaji ọkpụkpụ odida, ma na-egosi na tupu nke nnukwu deformation nke omen, iji na-remedial jikoro .The ígwè nwekwara ezi ike na ike ime mgbanwe iji ike ibu na-arụ ọrụ na ihe owuwu, nke na-enye a pụrụ ịdabere na nkwa maka mma ojiji nke ígwè Ọdịdị.
Uwe ejiji, ihe eji eme ya na nchara di iche iche, ihe ndi ozo na ihe ndi ozo bu ihe ndi ozo, ha di nso na aru nke isotropic, n'ime nsogbu nke nsogbu, nchara n 'onodu ogugu di nma, na isi echiche nke ndị ọrụ injinia ji arụ ọrụ na-agbanwe agbanwe, yabụ nsonaazụ ngụkọta oge ziri ezi ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya.
Mfe rụpụta ihe nchara ahụ nwere akụkụ dị iche iche eserese na mbadamba ígwè, nke a na-eme n'ime ihe ndị bụ isi site na ịgbado ọkụ, njikọta ma ọ bụ njikọ rivet, wee buru ya gaa saịtị ahụ maka mgbakọ na mgbatị. , ngwa ntinye dị mkpụmkpụ, arụmọrụ dị elu, na nrụzi, nnọchi dịkwa mfe. Usoro ihe owuwu a nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ntinye saịtị nwere uru nke nnukwu ogbe mmepụta na oke nkenke nke ngwaahịa emechara, ma kee ọnọdụ iji belata na-efu ma na-eweta uru akụ na ụba nke itinye ego.
(5) Adịghị emebi corrosion resistance.Ferrous metal ígwè Ọdịdị dị mfe ajari na ikuku, karịsịa na iru mmiri ma ọ bụ corrosion accelerated corrosion na corrosive ajụ, otú mgbe mkpa ịrụzi na mmezi, dị ka nchara, mkpuchi, wdg. elu.
Igwe na-eguzogide okpomọkụ dị elu na-adịghị mma .Steel anaghị eguzogide okpomọkụ dị elu, na mmụba nke okpomọkụ, ike nchara ga-ebelata.N'ime ọkụ ahụ, a ga-echekwa ngwongwo nchara na-enweghị nchebe maka ihe dịka 20min, yabụ usoro nchara dị mkpa ga-a attentiona ntị were usoro mgbochi ọkụ, dịka n'ụdị nchara n'èzí achịcha achịcha ma ọ bụ ihe ọkụ ọzọ, ma ọ bụ ịgba ọkụ ọkụ n'elu akụrụngwa.
Ngosipụta nke ngwaahịa ndị gwụchara tupu eserese emecha dịka nọmba eserese. Nọmba ahụ na-egosi na a na-ewepụta akụkụ ndị anaghị ese agba n'usoro nọmba, n'agbanyeghị njem ma ọ bụ ntinye
Nke gara aga: Factory ele mmadụ anya n'ihu mmepụta dịruru ná njọ
Osote: Ngwa ngwa ụlọ ọrụ
Mmepụta ụlọ ọrụ na ntinye okwu